Dowladda oo burburisay gooba ganacsi oo dad danyar ah lahaayeen.
Thursday May 21, 2020 - 15:00:00 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Maamulka gobolka Banaadir ugu magacaaban dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa qaaday tallaab uu ku cuuryaaminayo nolosha dadka danyarta ah ee ku dhaqan xaafado katirsan magaalada caasimadda ah ee Muqdisho.
Xalay saqdii dhexe ayuu maamulka gobolka Banaadir cagta mariyay ganacsiyo kuyiillay hareeraha laami yaraha Zoobe ee gobolka Banaadir, howlgalkan ayaa lagu burburiyay boqolaal miisas ah oo ay ku ganacsanayeen haween danyar ah.
Gaadiidka cagaf cagafyada ayaa lagu xaaqay miisaas iyo dhismayaal jiingado ka sameysan oo dad danyar ah oo haween ubadan ay ku iibinayeen khudaar iyo hilib, mas'uuliyiin katirsan maamulka gobolka Banaadir oo ay kamid yihiin guddoomiyaasha degmooyinka Wadajir iyo Hodon ayaa horkacayay ciidamadii burburinta geysanayay.
Ganacsatadii ladhibaateeyay oo maanta warbaahinta lahadlay ayaa sheegay in aysan haysan wax ay noloshooda ku maareeyaan iyagoona cambaareeyay falkan dulmiga ah ee lagu burburiyay hantidooda "saaka waxaan kusoo toosnay miisaskeeni aan hilibka iyo khudaarta ku iibsan jirnay oo laamiga hareerihiisa laga xaaqay majirin cid na ogeysiiska falkan foosha xun, maanta waxaan nahay kuwa fara badan oo hantidoodi la baabi'iyay" sidaas waxaa tiri haweenay warbaahinta lahadashay.
Ma ahan markii ugu horraysay oo dowladda Federaalk ay burburiso gooba ganacsi oo kuyaal magaalada Muqdisho waxaana xusid mudan in kaabayaasha dhaqaalaha dalka sida dekadda iyo garoonka diyaaradaha ay gacanta ku hayaan shirkado shisheeye
Dowladda Imaaraatka Carabta oo Markab ganacsi udirtay Yahuudda.
Dowladda Armenia oo tanaasul umuujisay Azarbijaan.
Dowladda Faransiiska oo ku dhawaaqday xaalad feejignaan ah kadib laba kaclaynta Covid19.
Jadwalka doorashooyinka dowladda Federaalka oo lagu dhawaaqay.
Ciidamada dowladda Masar oo markale Shacab Xasuuqay.